कोरोना भाइरसविरूद्धको ९७ लाख ८२ हजार डोज खोप नेपाल पुग्यो
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » कोरोना भाइरसविरूद्धको ९७ लाख ८२ हजार डोज खोप नेपाल पुग्यो
शुक्रबार १५ साउन, २०७८
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीनबाट सरकारले खरिद गरेको ४० लाख डोज भेरोसेल खोप नेपाल पुगेको छ । सो खोप आज काठमाडौं आइपुगेको हो । पाँचौ पटक नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडवडी ३३० जहाजले बेइजिङबाट थप खोप ल्याएसँगै ४० लाख खोप काठमाडौं आइपुगेको हो । शुक्रबार दिउँसो २ः०५ बजे खोप काठमाडौं आइपुगेको नेपाल वायुसेवा निगमका अपरेसन प्रमुख वरिष्ठ पाइलट दिपु ग्वार्चनले जानकारी दिनुभयो । निगमको जहाजले यसअघि चार कार्गो उडानबाट आठ लाख डोजका दरले ३२ लाख खोप ल्याइ सकेको थियो ।
सरकारले प्राप्त खोपलाई अग्रभागमा खटिने कर्मचारी, ५० वर्षमाथिका नागरिक र आवश्यकताका आधारमा वितरण शुरु गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारले चीन सरकारसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) मार्फत जम्मा ४० लाख डोज खोप खरिद गरेको थियो । चीनबाट यो खोप आएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसविरूद्धको खोप ९७ लाख ८२ हजार डोज आइपुगेको छ ।
प्रत्येक नेपालीलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सरकारले यस अघि नै खोप खरिदका लागि ४८ अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिसकेकोले थप खोप खरिद प्रक्रियासमेत शुरु गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार शुरुवातदेखि हालसम्म जम्मा ९७ लाख ८२ हजार डोज खोप नेपाल ल्याएर लगाउन सहज हुने पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
जहाज अवतरण गर्दा चक्का नखुलेपछि…